धरानमा आजदेखि ३ दिन नगर स्थापना दिवस मनाइँदै - निष्पक्षखबर
धरानमा आजदेखि ३ दिन नगर स्थापना दिवस मनाइँदै
धरानः आजदेखि ३ दिन धरानमा नगर स्थापना दिवस मनाइने भएको छ । धरान विधिवत् नगरपालिका घोषणा भएको ६१ औँ वर्षको अवसरमा हुने कार्यक्रमको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गर्ने भएका छन् ।
धरान उत्सवमा धरानको दीर्घकालीन विकासका सम्भावना र अवसर एवं धरानको पर्यटन विकासका सम्भावना तथा उपमहानगरपालिकाले चाल्नुपर्ने कदमका विषयमा छुट्टाछुट्टै कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गरिने भएको छ ।
धरान बजार विकास भएको १ सय वर्ष पूरा भएको अवसरमा २०५७ सालमा धरान शतवार्षिकी महोत्सव मनाइएको थियो । उक्त अवसरमा धरानको २० वर्षे दीर्घकालीन विकासको लक्ष्य निर्धारण गर्न पनि गोष्ठीको आयोजना गरिएको थियो । धरानलाई सांस्कृतिक पर्यटकीय केन्द्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापारिक केन्द्रको रूपमा समृद्ध सहर बनाउने नारा त्यस बेला तय गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री देउवालाई उत्सवको उद्घाटन अघि धरानको विकास निर्माणका बारेमा स्थलगत अवलोकन ब्रिफिङ गराइने भएको छ । उनले धरानको वडा नं. ६ मा रहेको धरानको फोहोर मैला सङ्कलन तथा ग्यास उत्पादन प्लान्टको उद्घाटन गर्ने भएका छन् ।
त्यस्तै, सेउती खोला स्थित नीराजन बस्तीको वडा ४ र १५ लाई जोड्ने पक्की पुलको पनि प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्ने भएका छन् । पब्लिक हाई स्कुलमा निर्मित प्राविधिक भवनको पनि उद्घाटन गर्ने भएका छन् ।
मुख्य उत्सव स्थल पब्लिक हाई स्कुलको मैदानमा ७६ वटा स्टलहरू निर्माण गरिएको छ । ती स्टलमा जनजातीय परिकारदेखि कृषि, महिला सिप, शिक्षा, प्रविधि, संस्कृतिजन्य प्रदर्शनी, व्यापारिक कारोबार सञ्चालन हुनेछन् । मुख्य मञ्चमा दैनिक सांस्कृतिक कार्यक्रमको आयोजना हुने भएको छ ।
‘धरान डे’ को अवसरमा ३ दिन ३५ सयमा धरान फन फ्लाइट हुने, पाथीभरा दर्शनका लागि २८ हजार
स्वदेशमै स्वरोजगार बन्न विद्यार्थीलाई एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव नेपालको सुझाव
सुनसरीका सञ्चारकर्मीले निर्माण गरेको सर्ट फिल्म ‘चेत’ यूएनडीपीको उत्कृष्ट वीसमा
विराटचाेक सुनसरीका सञ्चारकर्मीहरुले निर्माण गरेको जातीय विभेद विरुद्धको सर्ट फिल्म ‘चेत’ यूएनडीपीको उत्कृष्ट २० मा पर्न सफल भएको छ ।
जातीय विभेद विरुद्ध सचेतना जगाउने उद्देश्यले यूएनडीपीको आह्वानमा देशभरबाट निर्माण भएका ७० मध्ये सञ्चारकर्मी रोहित खनाल र रेवती निरौलाको टीमले निर्माण गरेको उक्त सर्ट फिल्म उत्कृष्ट २० मा छनोट भएको हो । रोहित खनालले निर्देशन गरेको यो सर्ट फिल्मलाई केशवजीले लेखेका हुन् ।
सर्ट फिल्ममा रेवती निरौला र कमल नेपालको मुख्य भूमिका रहेको छ । सर्ट फिल्मको छायांकन तथा सम्पादन रोहितले नै गरेका हुन् । जातीय विभेद विरुद्ध सचेतना जगाउने अधिकांश फिल्मभन्दा यो सर्ट फिल्म फरक ढंगले निर्माण गर्ने कोशिश गरिएको निर्देशक खनालले बताए ।
जबसम्म चेतनामा परिवर्तन हुँदैन तबसम्म जातीय विभेद अन्त्य हुन नसक्ने विषयलाई फिल्ममा समेटिएको उनको भनाइ छ । ३ मिनेटको सर्ट फिल्म ‘चेत’मा एक ब्राह्मण समुदायका व्यक्तिले कोरोना भाइरस संक्रमण भएको बेला आइसोलेसनमा ‘अछुत’ भएर बस्दा दलितहरुको पीडा महसुस गरी छुवाछुत त्यागेको कथा छ । यूएनडीपीले फेसबुक पेजमा पोष्ट गरेको दुई हप्तासम्म आउने भ्युज, कमेन्ट र लाइकलाई आधा र निर्णायक मण्डलको निर्णयलाई आधा अंकभार दिएर नजिता प्रकाशन गर्ने जनाइएको छ ।
सुनको भाउ १००० रुपैयाँ बढ्यो, चाँदीको ३० रुपैयाँ
विराटचोकः आज सुन र चाँदी दुवैको भाउ बढेको छ । सुनको भाउ तोलामा १ हजार रुपैयाँ तथा चाँदीको भाउ तोलामा ३० रुपैयाँ बढेको हो ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाल सुनको भाउ प्रति तोला ९३ हजार ७ सय रुपैयाँ कायम भएको छ । तेजाबी सुनको भाउ प्रति तोला ९३ हजार २ सय रुपैयाँ र असली चाँदीको भाउ प्रति तोला १ हजार ३ सय १५ रुपैयाँ निर्धारण भएको छ ।
हिजो र अस्ति सुनको भाउ तोलमा १ सय रुपैयाँका दरले बढेको थियो ।
सुनवर्षी नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन उद्घाटन
विराटनगरः सुनवर्षी– ९ मुस्लिम टोलमा सुनवर्षी नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन सञ्चालनमा आएको छ । भूकम्पप्रतिरोधी सो भवनको नेपाली कांग्रेसका नेता एंव पूर्व मन्त्री डा मीनेन्द्र रिजालले उद्घाटन गरे ।
स्थानीयले उपलव्ध गराएको १ बिघा ६ कठ्ठा जग्गामा ३ करोड ४१ लाख रुपैयाँको लागतमा पालिकाले भवन निर्माण भएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरुषोत्तम घिमिरेले बताए । २०७६ साल चैत १० गते भवनको शिलान्यास भएको थियो । बाबुल एण्ड खान जेवी सुनसरीले समय अगावै भवन निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरेको घिमिरेले बताए ।
भवन निमार्णका लागि प्रदेश सरकारबाट १ करोड तथा जिल्ला समन्वय समिति मोरङबाट ७६ लाख रुपैयाँ सहयोग प्राप्त भएको कार्यक्रममा जानकारी गराइएको थियो ।
भवन उद्घाटन गर्दै सांसद डा. रिजालले सुनवर्षी नगरपालिकाले विकास निर्माणसँगै पूर्वाधार निमार्णमा समेत उल्लेखनीय काम गरेको बताए । भवन निर्माणपछि पालिकाले दिेने सेवा थप प्रभावकारी हुने उनको भनाइ थियो ।
नगरपालिकाका मेयर कालीप्रसाद दासले सीमित स्रोत साधनका बाबजुद नगरपालिकाले सडक निर्माण कालोपत्रे तथा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा काम गरिरहेको बताए । भवन निर्माणका लागि स्थानीय महताव आलम, हामी अव्दुल रहिम, जमिमुल रहमान, खुर्सिद आलम, इस्तियाक अहमद, उतिउर रहमान लगायतले जग्गा प्रदान गरेका थिए । जग्गादातालाई कार्यक्रममा सम्मान गरिएको थियो ।
उद्घाटन कार्यक्रममा प्रदेश सांसद लीलाबल्लभ अधिकारी, रतुवामाई नगरपालिकाका मेयर रविन राई, सुनवर्षी नगरपालिकाकी उपमेयर मन्जु राई, वडाध्यक्ष तेजनारायण ताजपुरिया, नेपाली कांग्रेसका नेता गोपालराज भण्डारी तथा जग्गादात महताव आलम तथा पदमविनोद घिमिरे लगायतले आफ्नो भनाइ राखेका थिए ।